Gumiguru 22, 2021
Masangano maviri anove nhengo dzesangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions, kana kuti ZCTU, aendesa sangano iri kumatare edzimhosva achiti kongiresi yesangano iri iyo yakatarisirwa kuitwa svondo rinouya haifanire kuenderera mberi mushure mekunge ZCTU yatora danho rekuti masangano aya asavhote pakongiresi iyi.
Mumapepa asvitswa kudare repamusoro reHigh Court nesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pamwe nereFootwear Tanners and Allied Workers Union, ZCTU iri kupomerwa mhosva yekurambidza masangano aya kuvhota pakongiresi yesangano revashandi iri iyo yakatarisirwa kuitwa svondo rinouya muHarare.
Mutungamiri weARTUZ, VaObert Masaraure, vati havasi kufara nedanho rakatorwa neZCTU vachiti sangano ravo rakaita zvose zvinodiwa pamutemo kuti rikwanise kuvhota pakongiresi iyi.
VaMasaraure vati danho rakatorwa pamusangano weGeneral Council yeZCTU rekuvadzivisa kuvhota harisi pamutemo sezvo musangano weGeneral Council uyu wakaitwawo pasingatevedzwe bumbiro reZCTU. VaMasaraure vati musangano weGeneral Council uyu wakaitwa nguva yaifanira kuitwa musangano uyu wadarika saka nokudaro zvose zvakabvumiranwa pamusangano uyu hazvisi pamutemo.
Asi mutungamiri weZCTU, VaPeter Mutasa, vati pane kusawirirana pazvinoreva bumbiro remitemo yeZCTU, nokudaro nyaya iyi ichagadziriswa nematare.
VeARTUZ nesangano reFootwear Tanners and Allied Workers Union vanoti vari kuda mutongo wekuti kongiresi iyi imiswe kusvika vabvimidzwa kuvhota pakongiresi iyi.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kusangano reFootwear Tanners and Allied Workers Union
Musangano uyu ukabudirira, vakatarisirwa kukwikdzana pachigaro chemutungamiri weZCTU ndiVaPeter Mutasa naAmai Florence Taruvinga uye vakatarisirwa kukwikwidza pachigaro chemutevedzeri wemutungamiri wekutanga (1stVice President) ndiVaDominic Manyangadze naVaMandla Sibanda.
VaMuchapiwa Mazarura naAmai Miriam Katumba ndivo vakatarisirwawo kukwikwidza pachigaro chemutevevedzeri wemutungamiri wesangano iri wechipiri kana kuti Second Vice President.
Munyori mukuru weZCTU, kana kuti secretary general, anozodomwa panopera kongiresi.
Mune imwewo nyaya, nhumwa yeUnited Nations iri kushanya munyika, Amai Alena Douhan, nhasi vasangana nemutungamiri weMDCT, VaDouglas Mwonzora, gurukota rinoona nezvekutengeserana, Amai Sekai Nzenza, gurukota rezvematunhu, VaJuly Moyo, nevamwe.
Mutauriri waVaMwonzora, VaLloyd Damba, vati VaMwonzora vasvitsa nyaya dzakawanda kuna Amai Douhan dzinosanganisira kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvakanganisa zvakadii veruzhinji munyika.
Kusangana kwaita Amai Douhan naVaMwonzora kunouyawo apo masangano anoshanda akazvimirira achiti Amai Douhan vanofanira kusangana nevemapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana, vemabhizimusi, vedzisvondo, vadzidzi, vanorwira kodzero dzevanhu nevamwe kwete kuti vaswere vari mumahofisi ehurumende vachiudzwa zvinhu zvimwechete.
Hatina kukwanisa kutaura naAmai Douhan kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi hurumende yakati Amai Douhan vachazotaura nevatori venhau kamwe chete musi waGumiguru 28 kana vachinge vapedza misangano yavo.